Qodobo laga soo saray shirkii madaxweyne Xasan Sheekh iyo madax goboleedyada - Caasimada Online
Home Warar Qodobo laga soo saray shirkii madaxweyne Xasan Sheekh iyo madax goboleedyada
Qodobo laga soo saray shirkii madaxweyne Xasan Sheekh iyo madax goboleedyada
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa lasoo gaba-gabeeyay shirkii ay magaalada Muqdisho ku lahaayeen Golaha Wada-tashiga Qaranka, kaasi oo laga soo saaray war-murtiyeed ka kooban dhowr qoddob.
Shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa guddoominayay Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana goobjoog ah 5-ta Madaxweyne Goboleed ee dalka, ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo duqa magaalada Muqdisho.
Golaha ayaa waxa uu isku raacay in mudnaan gaar ah la siiyo Qabyo-tir iyo dhamaystir wakhtiyaysan oo lagu dul-dhiso guulihii horay looga gaaray dib-u-eegista Dastuurka, noqdana mid ay u-wada-dhanyihiin dhammaan heerarka Dowladda iyo qaybaha bulshada.
“Goluhu waxay ugu horeyntii u hambalyeeyeen Madaxweynaha la doortey ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud, waxayna Alle uga baryeen inuu waajibaadka qaran u fududeeyo. Goluhu wuxuu sidoo kale bogaadiyay sida dhaqsiyaha badan ee uu Madaxweynuhu isugu yeeray Golaha Wadatashiga Qaran taasoo ay ka muuqato rabitaan siyaasadeed iyo ka go’naansho dhab ah. Sidoo kale Goluhu waxay balanqaadeen inay si niyad-sami ku jirto ula shaqeynayaan Madaxweynaha.”
Waxa uu hoosta ka xariiqay Goluhu ahmiyadda ay leedahay in la dhamaystiro hannaanka amniga qaranka sida dhismaha ciidanka iyo la-dagaalanka argagaxisada.
Madaxda Golah Wada-tashiga Qaranka ayaa sidoo kale isla meel-dhigay in la helo nidaam doorasho oo mideysan iyo doorasho dimuqraadi ah oo dalka ka dhacda.
Ugu dambeyntiina waxay ku baaqeen in la mideeyo dadaalada wax looga qabanayo xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan. Sidoo kale, Goluhu wuxu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka inay kaalin buuxda ka qaataan xaaladda abaaraha ee taagan.
Hoos ka aqriso war-murtiyeedka oo dhameystiran:
Golaha Wadatashiga Qaran waxay isku raaceen qodobada soo socda:
I. DHAMAYSTIRKA DHISMAHA DOWLADNIMADA SOOMAALIYA
Iyadoo la tixraacayo lifaaqa heshiiskii 27 Maajo 2021 ee Dhameystirka Dhismaha Dowladnimada Soomaaliya oo ay Golaha Wadatashiga Qaranka gaareen, Goluhu wuxuu isku raacay inuu diiradda saaro, mudnaan gaar ahna siiyo arrimaha soo socda:
1- Qabyo-tir iyo dhamaystir wakhtiyaysan oo lagu dul-dhiso guulihii horay looga gaaray dib-u-eegista Dastuurka, noqdana mid ay u-wada- dhanyihiin dhammaan heerarka Dowladda iyo qaybaha bulshada.
2- Goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la dhamaystiro hannaanka amniga qaranka sida dhismaha ciidanka iyo la-dagaalanka argagaxisada.
3- Goluhu wuxuu isla-meeldhigay in la helo nidaam doorasho oo mideysan iyo doorasho dimuqraadi ah oo dalka ka dhacda.
4- Goluhu wuxuu si wadajir ah isugu raacay in la xaqiijiyo dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulsho oo lagu xaliyo khilaafaadka ragaadiyey dowladnimadeena.
5- Goluhu wuxuu isku raacay in mudnaan gaar ah la siiyo wada-halada Dowladda Federaalka iyo Somaliland.
6- Goluhu wuxuu ku heshiiyey taabba-gelinta, dardar-gelinta iyo dhamaystirka hannaanka federaalka si uu u noqdo mid gaara ilaa heer degmo, loona daadejiyo dowladnimada.
7- Goluhu wuxuu isla qaatay dhamaystirka hannaan garsoor madax-bannaan, hufan, isla markaana haqabtiri kara baahida caddaaladeed ee shacabka Soomaaliyeed.
II. XAALADDA ABAARAHA
Goluhu wuxuu isku raacay in si wadajir ah loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen, loona diyaar garoobo ka hortagga musiibooyinka soo noqnoqda, lana helo sidii xal waara looga gaari lahaa.
Wuxuu kaloo Goluhu ku baaqayaa in la mideeyo dadaalada wax looga qabanayo xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan. Sidoo kale, Goluhu wuxu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka inay kaalin buuxda ka qaataan xaaladda abaaraha ee taagan.
—- DHAMAAD —-